စိတ်ကူးပျော်ရာ: September 2012
Posted by + ! * thwe zin * ! + on September 30, 2012 at 7:30am
အိုမင်းမှုဆိုတာ မလွှဲမရှောင်သာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ သက်ရှိအားလုံး အချိန်နဲ့အမျှ အိုမင်းလာနေကြပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတဲ့ သဘောတရားကို လွန်ဆန်လို့ မရပေမယ့် အိုမင်းတဲ့ သွင်ပြင်တွေကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အရွယ်တင် နုပျိုလှပအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ နှစ် ၄၀ ကြာ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ အာဟာရရှိတဲ့ အစာတွေကို စားတာအပါအဝင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဘဝနေထိုင် စားသောက်မှုပုံစံကို လိုက်နာတာက အိုမင်းမှုကို နှောင့်နှေးစေပြီး အရွယ်တင် နုပျိုစေကြောင်း သိရပါတယ်။
(၁) စားနိုင်သော ပမာဏ၏ လေးပုံ သုံးပုံပဲ စားပါ
သင်စားနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာထက် လျှော့စားတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှ (အောက်ဆီဂျင် မော်လီကျူးတွေကို ထိခိုက်စေတဲ့) ဖရီးရယ်ဒီကယ် ထွက်နှုန်း လျော့နည်းစေပါတယ်။ ကိုယ်ထဲမှာ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေ များတာက အိုမင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစာကို များများစားတာကြောင့် ကယ်လိုရီ အပိုရရှိတာဟာ နုပျိုလှပမှုရဲ့ ရန်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ရေ၊ ရေနွေးကြမ်းနှင့် ရေဓာတ်များသော စွပ်ပြုတ်သောက်ပါ
ရေဟာ အစာကို ကြေညက်စေတာကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို စုပ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ရေဟာ အဆစ်တွေကို ချောမွေ့စေကာ အမြှေးပါးတွေကို စိုစွတ်စေတာကြောင့် နေ့စဉ် ရေနဲ့ အရည်များများပါတဲ့ စွပ်ပြုတ်ကို သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
(၃) အစာစားချင်စိတ်ကို ဟန်ချက်ညီမျှအောင် လုပ်ပါ
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အပူဓာတ် လွန်ကဲမှုကြောင့် အစာ စားချင်စိတ် များတဲ့အခါ ဟန်ချက်ညီသွားစေဖို့ သခွားသီး၊ တရုတ်နံနံ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ မုန်လာဥ၊ ဆလတ်ရွက်၊ ခရမ်းချဉ်သီး စတဲ့ အေးမြစေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ ဖရဲသီး၊ ပန်းသီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ စပျစ်သီး၊ သစ်တော်သီးတို့လို သစ်သီးတွေကို စားပေးရပါမယ်။ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ကိုလည်း ရရှိစေတဲ့အတွက် အရွယ်တင် နုပျိုစေပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2012 07:40:00 AM No comments:
စက်တင်ဘာလ 30, 2012 တွင် 9:15am မှာ ငှက်ကလေး မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
♥ ♫ ♥ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ ♥ ♫ ♥
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2012 02:39:00 AM No comments:
Posted by + ! * thwe zin * ! + on September 29, 2012 at 3:03am
မူလနှစ်ဖြာ ၊ သစ္စာနှစ်ခု ၊ လေးခုအလွှာ ၊ အင်္ဂါတစ်ဆယ့်နှစ်ပါး ၊ တရားကိုယ်များနှင့် သုံးပါးအစပ် ၊ နှစ်ရပ်မူလ ၊ ၀ဋ်သုံးဝနှင့် ကာလ သုံးဖြာ ၊ ခြင်းရာနှစ်ဆယ် ၊ ဤရှစ်သွယ်ကို အလွယ်ကျက်မှတ် သိစေအပ်သည် သံသရာမှလွတ်ကြောင်းတည်း။
* ဖောက်ပြန် ၊ ခံစား ၊ မှတ်သား ၊ ပြုပြင်၊ သိဝိဥာဏ် ၊ ငါးအင်ခန္ဓာမှတ် ။
* မျက်စိ ၊ နား၊ နှာ ၊လျှာ ၊ကိုယ် ၊ စိတ်။
အဆင်း၊ အသံ ၊ အနံ့၊ အရသာ ၊ တွေ့ထိစရာ ၊ ကြံတွေး စရာ ။
မြင်စိတ် ၊ ကြားစိတ် ၊ နံစိတ် ၊ စားစိတ် ၊ ယားနာကောင်းစိတ် ၊ တွေးတောစိတ် ။
* မြင်စိတ် ၊ ကြားစိတ်၊ နံစိတ်၊ စားစိတ်၊ ယားနာကောင်းစိတ်၊
လောဘစိတ်၊ ဒေါသစိတ်၊ မောဟစိတ်၊အလောဘစိတ်၊အဒေါသစိတ် ၊ တွေး တောစိတ် ၊
( အတွင်းဧည့်သည် ခြောက်ယောက်)
လေကိုထုတ်သောစိတ် ၊ လေကိုသွင်းသောစိတ်၊ (အိမ်သည်နှစ်ယောက်) ။
စိတ္တာနုပဿနာ အရှုခံတရား (၁၃)ပါး
* ဥပေက္ခာဝေဒနာ မျက်လုံးမှာပေါ်သည် ၊ ဥပေက္ခာဝေဒနာ နားမှာပေါ်သည် ။
ဥပေက္ခာဝေဒနာ နှာခေါင်းမှာပေါ်သည် ။ ဥပေက္ခာဝေဒနာ လျှာမှာပေါ်သည်။
သုခဝေဒနာ ကိုယ်မှာပေါ်သည် ။ ဒုက္ခဝေဒနာ ကိုယ်မှာပေါ်သည် ။
* သောမနဿဝေဒနာ မနောမှာပေါ်သည်။ ဒေါမနဿဝေဒနာမနောမှာပေါ်သည် ။
ဥပေက္ခာဝေဒနာ မနောမှာပေါ်သည် ။ ( အတွင်းဧည့်သည် သုံးယောက်)
ဝေဒနာနုပဿနာ အရှုခံတရား(၉)ပါး ။
* သမ္မာဒိဌိ ၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပ ၊ သမ္မာဝါယာမ ၊ သမ္မာသတိ၊ သမ္မာသမာဓိ ၊ သမ္မာဝါစာ ၊
သမ္မာကမ္မ န္တ ၊ သမ္မာအာဇီဝ ၊
( လောကုတ္တရာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား )
*အ၀ိဇ္ဇာနှင့် တဏှာ ရင်းခံ ဥပါဒါန် ၊ ကံကြောင့် ရုပ်နာမ်ပေါ် ၊ အပင်မှ မျိုး ၊ မျိုးမှအပင် ၊ အမျှင်မပြတ် ၊ ဆက်စပ်သည့်ဟန် ၊ ကံကြောင့် နာမ်ရုပ် ၊ နာမ်ရုပ်ကြောင့်ကံ ၊ အဖန်ဖန် ဖြစ်ပြန် နည်းလျော် ၊ ဗြဟ္မာသိကြား စသည်များက ထင်ရှားပြုပြင် ၊စီရင်ဖန်ဆင်း ၊ အကြောင်းရင်းကြောင့် လူနတ်များစွာ ၊ သတ္တ၀ါတို့ ဖြစ်လာရမူ မဟုတ်ဟုဥာဏ်ဖြင့် ရှု၍မျှော် ။
" ဖြစ်ပျက်သမျှ သင်္ခါရ၊ ဒုက္ခသစ္စာမှတ်၊ ဖြစ်ပျက်မှု့တွင် ငါကောင်ထင် ၊ ခင်မင်သမုဒယမှတ် ။ ရုပ်နာမ်အားလုံးဖြစ်ပျက်သုဉ်း၊ ချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှတ် ။ ချုပ်ဆုံးမှု့တွင် ဥာဏ်သက်ဝင် ၊ သိမြင်မဂ်ဟုမှတ် "
" ယုံကြည်ကျန်းမာ၊ စိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်၊ လွန်စွာအားထုတ်၊ နာမ်နှင့် ရုပ်ကို၊ ဖြစ်ချုပ်ဥာဏ်မြင်၊ ဤငါးအင် မှန်ပင်မဂ်ရကြောင်း "
"မစွန့်ကာမ ၊ ဆရာမရှိ ၊၀ီရိယလျှော့ အားအင်ပျော့ကာ ၊လွန်စွာယူမှား ဤငါးပါး ၊တရားမဂ်ဖိုလ် ဝေးလေသတည်း ။ "
" သူတော်ဆည်းကပ် မြတ်တရားနာ၊ လျော်စွာအကျင့် ၊ မဂ်ဖိုလ်ခွင့် ၊ ရလင့်ဧကန်သာ ။"
(ငါသည်မုချသည်ရမည် ၊ အချိန်ပိုင်းသာ လိုတော့သည် ။) ဖြစ်ပျက်က - ဒုက္ခသစ္စာ သိတာက - မဂ္ဂသစ္စာ ၊
သေတာက - သမုဒယသစ္စာ နောင်ခန္ဓာ မလာတာက - နိရောဓသစ္စာ
အားလုံးပဲ သာဓုခေါ်ဆိုနိူင်ကြပါစေ....။ပိုစ့် ပြတ်သွားတဲ့တွက် ထပ်မံ ပြန်တင်လိုက်ပါသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2012 02:21:00 AM No comments:
အား betalaypar ရေးသားပါသည် စက်တင်ဘာ 30, 2012 at 1:02pm
- ဘီစီ ၅ ရာစုက ဂရိပန်းချီကျော်ဇူးဆစ်ဟာ သူရဲ့ရုပ်တူပန်းချီကိုကြည့်ပြီး တအားရယ်မောရာကနေ သွေးကြောပြတ်သေသွားပါတယ်။
- စကော့တန်မြို့စားကြီး ဂျိမ်းဒေါက်ကလပ်ဟာ သူပထမဆုံးသယ်ဆောင်တင်သွင်းလာခဲ့တဲ့ ခေါင်းဖြတ်စက်နဲ့ သူကိုယ်တိုင်အသတ်ခံရပါတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲ သူ အအေးပတ်ပြီးသေသွားပါတယ်။
- ဗြိတိသျှစာရေးဆရာ သောမတ်မေဆိုသူဟာ အသက်ကြီးပြီး တဖြည်းဖြည်းဝလာတဲ့အတွက် မေးစေ့ကို အ၀တ်နဲ့ပတ်ပြီး ဦးခေါင်းကသိုင်းထားရပါတယ်။ အဲဒီသိုင်းထားတဲ့ အ၀တ်ကြောင့် အသက်ရှုကြပ်ပြီးသေပါတယ်။
- ဗြိတိသျှစာရေးဆရာ သောမတ်အုတ်ဝေး ဆိုတဲ့လူဟာ ၁၆၈၅ ခုနှစ်မှာ အလွန်ဆင်းရဲသွားပါတယ်။ အစာမရှိဘဲ ရက်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတဲ့အတွက် သူတပါးထံက လက်ဖြန့်တောင်းရာက ငွေတစ်ဂီနီရပါတယ်။ ပေါင်မုန့်တစ်လုံးဝယ်စားပါတယ်။
တစ်လုတ်တည်းနဲ့ နင်ပြီး သေသွားပါတယ်။
- ပြင်သစ်စာရေးဆရာ ဂျီရပ်ဒီနာ့ဗယ့် ဟာ ၁၈၅၅ ခုနှစ်မှာ လမ်းဘေးမီးတိုင်တစ်တိုင်မှာ ဂါဝန်တစ်ထည်နဲ့ ကြိုးဆွဲချသေသွားပါတယ်။
- ၁၈၈၄ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်စုံထောက်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ အယ်လင်မင်ကာတင်ဟာ ကိုယ့်လျှာကိုယ်ကိုက်မိရာကနေ အနာရှိန်တက်ပြီး သေဆုံးသွားပါတယ်။
- ဗြိတိသျှစာရေးဆရာ မြို့စားကြီး ဟယ်ရီစတင်းဘော့ဟာ ၁၉၀၅ မှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို အရက်မူးပြီး မီးထိုးတဲ့သံချောင်းနဲ့ ရိုက်နှက်မယ်ပြုရင်းပဲ မီးပုံထဲလဲကျသေပါတယ်။
- ဗြိတိသျှစာရေးဆရာ အားနောကင်းနက်ဟာ ပြင်သစ်ကသောက်ရေဟာ စိတ်ချရပါတယ်လို့ ဟောပြောပြီး ရေကို လက်တွေ့သောက်ပြပါတယ်။ အဲဒီရေကနေ တွိုက်ဖိုက်ရောဂါရပြီး သူသေသွားပါတယ်။
- ဗြိတိသျှကဗျာဆရာ လိုယိုနယ်ဂျွန်ဆင်ဟာ ၁၉၀၂ မှာ အရက်ဆိုင်ကုလားထိုင်ပေါ်က လိမ့်ကျပြီး သေသွားပါတယ်။
- ရုရှားဘာသာရေးဆရာကြီး ရပ်စပြူတင်ကို ၁၉၁၆ ခုနှစ်မှာ အဆိတ်ခတ်ထားတဲ့ကိတ်မုန့်၊ ၀ိုင်အရက်တွေနဲ့ လုပ်ကြံပေမယ့်မသေပါဘူး။ သေနတ်နဲ့ နှစ်ကြိမ်တိတိ ပစ်ခတ်လုပ်ကြံပေမယ့်လည်း မသေပါဘူး။ နောက်ဆုံး ကြိုးတုပ်ပြီး မြစ်ထဲတွန်းချလိုက်တော့မှ သေပါတယ်။
- အမေရိကန်မှာနေတဲ့ နပိုလီယန်ရဲ့အနွယ်တော် ဂျာရိုဗီနပိုလီယန်ဟာ သူ့ဇနီးမွေးထားတဲ့ ခွေးက ကိုက်လို့သေသွားပါတယ်။
- အမေရိကန်က ကောလိပ်တော်အရာရှိ လန်ဂလီတော်လီယားဟာ သူ့ရဲ့ အိမ်ထဲကို သူခိုးဝင်ရင် ဖမ်းမိအောင်လို့ ထောင်ချောက်ဆင်ထားပါတယ်။ ၁၉၄၇ မှာ သူ့ထောင်ချောက်ကို သူပြန်မိသွားပြီး အပ်ချုပ်စက်နဲ့ စာအုပ်တွေ ခေါင်းပေါ်ပြုတ်ကျသေပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2012 02:20:00 AM No comments:
Posted by panbaduackt on September 30, 2012 at 12:03am
မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ မမတွေအတွက်တော့ မင်္ဂလာဝတ်စုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်တယ်
သူများအတွက်ပဲတင်ပေးနိုင်တာ ပိတာက်တော့စွံသေးဘူး ဒီတနှစ်တော့လွဲသွားပြန်ပြီထင်ပါတယ် ဟိဟိ
ဒီဝတ်စုံလေးတွေက ညပိုင်း dinner party အတွက် ပိုသင့်တော်မယ်ထင်တယ်နော်
ဟိဟိ သူများအကျိုးဆောင် ကိုယ်ကျိုးများအောင်မလားလို့
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2012 02:13:00 AM No comments:
ရေကူး ရေစိမ်ချိုး ရေသောက် ရေပက်ဖျန်းရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိူင်မလဲ
စက်တင်ဘာလ 30, 2012 တွင် 8:32am မှာ popo မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
by nang kha yea on 28.9.2012
ရေချိုးတာက စိတ်နဲ့ခန္ဓာကို လန်းဆန်းသွားစေတယ်ဆိုတာ သင်သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ လတ်တလော လေ့လာမှုအရ ရေရဲ့အပူချိန်က အေးချင်အေး၊ နွေးချင်နွေး နေပါစေ၊ ရေထဲကို စိမ်ချိုးတာက ကျန်းမာနေတဲ့ လူတွေအတွက် ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရေစိမ်ချိုးချိန် ၂၄ မိနစ် ကြာပြီးချိန်မှာ လူရဲ့ဗဟိုအာရုံကြော စနစ်ဟာ အနားရကာ အာရုံစူးစိုက်အား ပိုကောင်းလာပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျတာနဲ့ ပူပင်သောက ဟူသမျှကိုလည်း လျော့သွားစေပါတယ်။ ခြေထောက်ကို ရေစိမ်တာကလည်း ညမှာ ကောင်းကောင်း အိပ်မောကျစေပါတယ်။ Physiology Anthropology ရဲ့ လေ့လာမှုအရ ဒူးအထိ ခြေထောက်တွေကို မိနစ် ၂၀ လောက် ကြက်သီးနွေးရေထဲ စိမ်တဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် ရေချိုးတဲ့သူတွေက ကောင်းကောင်း အိပ်မောကျစေပြီး မလုပ်တဲ့သူတွေထက် အိပ်စက်မှု အရည်အသွေးလည်း ကောင်းမွန်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကြက်သီးနွေးရေထဲ စိမ်ဖို့ အချိန် မပေးနိုင်ရင်တောင် ခြေချင်းဝတ်တွေပေါ်ကို ကြက်သီးနွေးရေ လောင်းချပေးပါ။ အချိန် ၃၀ စက္ကန့်လောက် လုပ်ပေးရုံနဲ့ အပန်းပြေမှုကို ခံစားရမှာပါ။
ဇွန် Ref:By Good Health Originally
source >>> http://www.facebook.com/notes/health-articles/စိတ်ဖိစီးမှု-လျော့ကျစေသည့်-ရေ/208606519270866
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2012 01:38:00 AM No comments:
စက်တင်ဘာလ 30, 2012 တွင် 4:29pm မှာ အရှုံးပေးပါတယ် မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/30/2012 01:28:00 AM No comments:
မုသားစကားပြောခြင်းကြောင့် စိတ်ပိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်း ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေတတ်
by Health Articles ·
မုသားကင်းစင်သော စကားများသည် စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်း ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေကြောင်း သုတေသန ရလဒ်တစ်ခုက ဖော်ပြခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အင်ဒီယားနားရှိ နော်တာဒိမ်း တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများသည် မုသားစကားနှင့် ကျန်းမာရေးတို့ ဆက်စပ်မှု ရှိမရှိ လေ့လာမှု တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (၁၀) ပတ်ကြာ အချိန်ယူ ပြုလုပ်သေ
ာ သုတေသန ရလဒ်က မုသားစကားပြောခြင်းသည် လူတစ်ဦး၏ စိတ်ပိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်း ကျန်းမာရေးကို အနည်းနှင့်အများ ထိခိုက်စေတတ်ကြောင်း ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့သည်။
လူပေါင်း (၁၁၀) ပါဝင်သော သုတေသန စစ်တမ်းတွင် ယင်းတို့အနက် (၆၆)ရာခိုင်နှုန်းအား သုတေသန ပြုလုပ်နေသော ကာလအတွင်း ကြီးကျယ်သော ကိစ္စများနှင့် သေးငယ်သော ကိစ္စများတွင် အမျိုးမျိုးသော လိမ်ညာစကားတို့ကို ပြောကြားစေခဲ့သည်။ ကျန်သူများကိုမူ မည်သည့် သီးခြားစေခိုင်းမှုမျှ မပြုလုပ်ဘဲ သာမန်အတိုင်းသာ နေထိုင်ဖြတ်သန်းစေသည်။ သုတေသန စစ်တမ်းအတွက် ရွေးချယ်ထားသူ အားလုံးသည် ဘွဲ့ရသူများနှင့် ပညာတတ် အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဆက်နွယ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို တစ်ပတ်လျှင် တစ်ခါ မှတ်တမ်းပြုစုထားပြီး (၁၀)ပတ်လုံးလုံး လေ့လာမှု ပြုခဲ့ကြသည်။
ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိမှုများကို အော်လန်ဒို ဖလော်ရီဒါတွင် ပြုလုပ်သော အမေရိကန် စိတ်ပညာ အဖွဲ့ချုပ် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြခဲ့သည်။ အလိမ်အညာစကားကို နည်းပါးစွာ ပြောဆိုရသည့် အဖွဲ့တွင် လူအများသည် (၅) ပတ်မျှ အကြာတွင် မိမိကိုယ်ကိုယ် ရိုးသားသူဟု ယူဆလာက စိတ်ချမ်းမြေ့ကြသလို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိတွေ့မှု သဟဇာတဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ မုသားစကား ပြောဆိုရသူများသည် လူမှုဝန်းကျင်နှင့် ထိတွေ့ရာတွင် ပြဿနာအချို့ ရှိလာသလို စိတ်ပိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက် သက်ရောက်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာကြောင်း သုတေသီများက ပြောကြားခဲ့သည်။
"မကြာသေးခင်က လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေဟာ ပျမ်းမျှ တစ်ပတ်ကို (၁၁) ကြိမ်လောက် လိမ်ညာစကားတွေ ပြောတတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုပါ" ဟု ယခု သုတေသန စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ဒေါက်တာ အန်နီတာကယ်လီက ရှင်းပြခဲ့သည်။ နော်တာဒိမ်း တက္ကသိုလ်၏ စိတ်ပညာ ဌာနမှ ပရော်ဖက်ဆာ တစ်ဦးဖြစ်သူ ကယ်လီက "တွေ့ရှိချက်တွေအရ လူတိုင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် နေ့စဉ်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မုသားစကားတွေကို လျှော့ချခြင်းဟာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ပြောရရင် အလိမ်အညာ နည်းတဲ့သူဟာ ဖိစီးမှု ပိုနည်းပါလိမ့်မယ်" ဟုလည်း ဆက်လက် ပြောကြားသွားသည်။
News from : Health Articles
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/29/2012 12:29:00 PM No comments: